Indawo yokutyela kunye neeApartments Kobal Vrhpolje Vipava
Vipava, Ajdovščina, Slovenia
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTine
Izindlu zethu zepropathi zokuhlala kunye nezokutyela kwipropathi enye ekhonza iipizza ezimnandi kunye nokunye, ngumntwana, usapho onobuhlobo, unendawo eninzi kwaye uhlala engaxakekanga. Lo mhlaba umi kumbindi weLali yaseVrhpolje kwaye ikumgama wokuhamba wecawe ebandakanya i-tile mosaic entsha emangalisayo. Ungaphinda uhambe uhambo okanye uthathe ibhayisekile ujikeleze izidiliya ezintle. Kukwakho neendawo ezininzi zokuthengisa iwayini kule lali apho unokuthenga kwaye ungcamle iwayini zalapha ekhaya.
Iipatimenti kunye nendawo yokutyela i-Kobal ineendawo zokuhlala ezinoxolo. Nge-WiFi eKhawulezayo yasimahla, iibhedi zesateen zasimahla kunye nokufikelela kukhetho oluhle lwemisebenzi kwipropathi, kubandakanya irenti yebhayisekile, itafile yepool, iterrace, indawo yokudlala yabantwana kunye nevenkile yokutyela enezihlalo eziyi-130+ kumagumbi okutyela ama-3 apho sibonelela ngepizza ekhethekileyo yomgubo wehemp. . Unokusigcinela isidlo sakusasa esenziwe ekhaya nge-euro eyi-8.5 kuphela eyongezelelweyo ngomntu ngamnye.
Igumbi ngalinye lineTV enescreen esicaba, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, i-air conditioner, iheater, indawo yokugcina, itafile, ifestile kunye negumbi lokuhlambela labucala elinesomisi seenwele kunye neetawuli, iheater, ishawa, isinki, isipili esinesibane, umoya, iplagi yombane. kunye nendlu yangasese.
Umbuki zindwendwe ngu- Tine
Ungasoloko ubuza ukuba ufuna naluphi na uncedo.